WordPress मा .htaccess फाइलको साथ काम गर्दै | Martech Zone
वर्डप्रेसमा .htaccess फाईलसँग काम गर्दै
मङ्गलबार, अप्रिल 27, 2021 मङ्गलबार, अप्रिल 27, 2021 ग्यारी स्टीभन्स
WordPress एक उत्तम प्लेटफर्म हो जुन मानक वर्डप्रेस ड्यासबोर्ड कत्तिको विस्तृत र शक्तिशाली छ त्यसद्वारा सबै उत्तम गरिएको छ। तपाईले धेरै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईंको साइटले महसुस गर्ने तरीकालाई र अनुकूलित गर्ने शर्तहरूमा, केवल उपकरणहरू प्रयोग गरेर जुन WordPress द्वारा तपाईंलाई मानकको रूपमा उपलब्ध गराएको छ।
कुनै पनि वेबसाइट मालिकको जीवनमा एक समय आउँदछ, जे होस्, जब तपाईंलाई यो कार्यक्षमता भन्दा टाढा जान आवश्यक पर्दछ। WordPress संग काम गर्दै .htaccess फाइल यो गर्न एक तरिका हुन सक्छ। यो फाईल एक कोर फाईल हो जुन तपाईंको साइटमा निर्भर गर्दछ, र मुख्यतया तपाईंको वेबसाइटको कामको permalink कसरी काम गर्दछ भनेर सम्बन्धित छ।
.Htaccess फाइल धेरै उपयोगी चीजहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, यद्यपि। हामीले पहिले यी मध्ये केही कभर गरिसकेका छौं, बनाउने प्रक्रिया सहित regex WordPress मा redirects, र मा अधिक सामान्य सिंहावलोकन हेडर वर्डप्रेस को लागी रिडिरेक्ट गर्दछ। यी दुबै गाईडहरूमा, हामीले पहुँच गर्नुभयो र .htaccess फाईल सम्पादन गर्नुभयो, तर फाइल पहिले स्थानमा किन छ भनेर धेरै व्याख्या नगरीकन, र तपाईं यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यो यस लेखको उद्देश्य हो। पहिले हामी यो हेर्नेछौं कि .htaccess फाइलले मानक वर्डप्रेस सेटअपमा के गर्छ। त्यसो भए, हामी कसरी वर्णन गर्ने छौं कि तपाईं यसलाई कसरी पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ र कसरी तपाईं यसलाई सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तमा, हामी तपाईंलाई यो देखाउन सक्दछौं किन कि तपाईं त्यो गर्न चाहनु हुन्छ।
.Htaccess फाइल के हो?
पहिला आधारभूत कुराहरू बाहिर निकालौं। .Htaccess फाईल प्राविधिक रूपले होईन WordPress फाईल। वा, यसलाई थप सटीक राख्नको लागि ।htaccess फाईल वास्तवमै फाईल हो जुन अपाचे वेब सर्भरहरू द्वारा प्रयोग गरिएको छ। यो प्रणाली हो हाल प्रयोग भइरहेको छ WordPress को साइट र होस्टहरूको विशाल बहुमत द्वारा। अपाचेको सर्वव्यापीताको कारण जब यो WordPress साइटहरू प्रबन्ध गर्न आउँदछ, त्यस्ता प्रत्येक साइटमा एक .htaccess फाइल छ।
.Htaccess फाईलले अन्य सुविधाहरू साझा गर्दछ जुन तपाइँको WordPress साइटले कन्फिगरेसनको लागि प्रयोग गर्दछ। फाइलनाम एक लुकेको फाइल हो र सम्पादन गर्न लुकाउनु पर्ने आवश्यक पर्दछ। यो तपाइँको WordPress साइटको मूल निर्देशिकामा बस्दछ।
याद गर्नुहोस्, .htaccess फाईलले एक चीज गर्दछ र केवल एक चीज: यसले तपाइँको साइटको permalink कसरी देखाइने छ निर्धारण गर्दछ। त्यो हो।
यस साधारण विवरणको पछाडि लुकेको धेरै जटिलता छ। यो किनभने धेरै साइट मालिकहरू, प्लगइनहरू र विषयवस्तुहरू परिवर्तन गर्दछन् जुन तपाईंको वर्डप्रेस साइट भित्र पर्मलिinks्कहरू प्रयोग गरिन्छ। प्रत्येक चोटि जब तपाईं (वा प्लगइन) तपाईंको permalinks काम गर्ने तरीकामा परिवर्तन गर्दछ, यी परिवर्तनहरू .htaccess फाईलमा भण्डारण गरिन्छ।
सिद्धान्तमा, यो एक राम्रो राम्रो प्रणाली हो, र सुरक्षित छ। यद्यपि वास्तविक संसारमा यसले वास्तविक समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्दछ। एउटा त्यो किनभने Ers 75% विकासकर्ताहरूले जाभास्क्रिप्ट प्रयोग गर्छन्, र यसैले अपाचे प्रयोग गर्न सजिलो छैन, धेरै प्लगइनहरू .htaccess फाइललाई तपाईंको साइट असुरक्षित छोड्ने तरीकाले अधिलेखन गर्न सक्दछ। फिक्सिंग (वा वास्तवमै स्पट गर्दै पनि) यस प्रकारको मुद्दा यहाँ हाम्रो गुंजाइश बाहिर छ, तर प्लगइनको बारे मा मानक चेतावनीहरू लागू हुन्छ - केवल तपाईलाई विश्वास गर्नेहरू मात्र स्थापना गर्नुहोस्, र यो नियमित रूपमा यस प्रकारको सुरक्षा प्वालहरू सुधार गर्न अद्यावधिक हुन्छन्।
.Htaccess फाइल खोज्दै र सम्पादन गर्दै
.Htaccess फाइल मुख्य रूपमा तपाइँको साइटमा permalinkहरू ह्यान्डल गर्न डिजाइन गरिएको हो भन्ने तथ्यको बाबजुद पनि तपाईले फाईललाई सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ धेरै उपयोगी नतीजाहरू प्राप्त गर्न: यसमा पुनःनिर्देशनहरू समावेश गर्नु, वा बाहिरी पहुँच सीमित गरेर तपाईंको साइटमा सुरक्षा सुधार गर्नु समावेश छ। विशेष पृष्ठहरू।
यो सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई त्यो कसरी गर्ने भनेर देखाउनेछौं। तर पहिला…
चेतावनी: .htaccess फाइल सम्पादन गर्नाले तपाईंको वेबसाइट भंग गर्न सक्दछ।
तपाईंको साइटमा चल्ने मौलिक फाइलहरूमा कुनै परिवर्तनहरू जोखिमपूर्ण छ। तपाईंले गर्नु पर्छ जहिले पनि तपाइँको साइट जगेडा गर्नुहोस् यसमा कुनै परिवर्तन गर्नु अघि, र प्रत्यक्ष साइटलाई असर नगरी प्रयोग गर्नुहोस्।
वास्तवमा, त्यहाँ एक राम्रो कारण छ किन .htaccess फाईल धेरै वर्डप्रेस प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छैन। साना व्यवसाय वेबसाइटहरूको लागि वर्डप्रेसको स्पष्ट बहुमतको हिस्सा छ, र यसको मतलब यो हो कि उनीहरूका धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन्, हामी भन्दछौं, सब भन्दा प्राविधिक रूपमा झुकाव हुँदैन। यसैले नै .htaccess फाइल पूर्वनिर्धारितद्वारा लुकाईएको छ - नौसिखाहरू गल्ती गर्नबाट जोगिन।
.Htaccess फाईल पहुँच र सम्पादन गर्दै
ती सबै बाहिर, हामी कसरी .htaccess फाइल पहुँच गर्न सक्दछौं हेरौं। त्यसो गर्न क्रममा:
एक FTP ग्राहक प्रयोग गरेर वेबसाइटमा एक जडान सिर्जना गर्नुहोस्। त्यहाँ धेरै निःशुल्क, उत्तम FTP ग्राहकहरू छन् FileZilla। तपाईंको साइटमा FTP जडान गर्नको लागि प्रदान गरिएको कागजातको माध्यमबाट पढ्नुहोस्।
एकचोटि तपाईंले FTP जडान स्थापना गरेपछि, तपाईंलाई सबै फाइलहरू देखाइनेछ जुन तपाईंको साइट बनाउँदछ। यी फोल्डरहरूमा एक नजर राख्नुहोस्, र तपाईंले रुट डाइरेक्टरी भनिने एक देख्नुहुनेछ।
यस फोल्डर भित्र, तपाईं आफ्नो .htaccess फाइल देख्नुहुनेछ। यो सामान्यतया त्यस फोल्डरमा फाईलहरूको सूचीको शीर्षमा हुन्छ। फाईलमा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि अवलोकन / सम्पादन क्लिक गर्नुहोस्।
फाईल पाठ सम्पादकमा खुल्नेछ।
र यो हो। तपाईंलाई अब तपाईंको फाईलमा परिवर्तन गर्न अनुमति छ, तर ध्यान दिनुहोस् तपाईंले त्यसो गर्न नचाह्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई अर्को फाईलमा यो फाइल कसरी प्रयोग गर्ने भनेर देखाउनेछौं, तर हामी अघि यो गर्नु राम्रो विचार हो एक स्थानीय प्रतिलिपि बनाउनुहोस् तपाईंको .htaccess फाइलको (मानक "को रूपमा बचत गर्नुहोस्" संवाद प्रयोग गरेर) स्थानीय परिवर्तन गर्नुहोस्, र त्यसपछि चरणबद्ध साइटमा फाइल अपलोड गर्नुहोस् (जसरी हामीले माथि उल्लेख गर्यौं)।
.Htaccess फाईल प्रयोग गर्दै
अब तपाईं .htacess फाईल द्वारा प्रदान गरिएको अतिरिक्त कार्यक्षमता प्रयोग गर्न सुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ। केही आधारभूतहरूसँग सुरू गरौं।
301 पुनर्निर्देशन - 301०१ पुनःनिर्देशित कोडको सानो टुक्रा हो यसले एक पृष्ठबाट अर्को पृष्ठमा आगन्तुकहरू पठाउँदछ, र आवश्यक छ यदि तपाईं बाह्य साइटबाट लिंक गरिएको विशेष ब्लग पोष्ट स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ भने। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं वेबसाइट पुन: निर्देशित गर्न .htaccess फाईल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ साइटको पुरानो HTTP संस्करणबाट नयाँ, अधिक सुरक्षित, HTTPS संस्करणमा आगन्तुकहरूलाई निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ। .Htacess फाईलमा यसलाई जोड्नुहोस्:
सुरक्षा - WP का लागि उन्नत सुरक्षा रणनीतिहरू लागू गर्न .htaccess फाइल प्रयोग गर्नका लागि थुप्रै तरिकाहरू छन्। यी मध्ये एक हो विशेष फाईलहरूको पहुँच लक गर्नुहोस् ताकि केवल सही प्रमाणीकरणको साथ प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको WordPress साइटमा चालित मूल फाइलहरू पहुँच गर्न सक्दछन्। तपाईं यो कोड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको .htaccess फाईलको अन्तमा थपिएको, कोर फाइलहरूको संख्यामा पहुँच सीमित गर्न:
URL हरू परिमार्जन गर्नुहोस् - कार्यान्वयन गर्न अझ जटिल एक भए पनि .htaccess फाईलको अर्को उपयोगी सुविधा, यो हो कि फाइलहरू यूआरएलहरू प्रदर्शन हुने तरिका नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जब तपाईंको दर्शकहरूले तपाईंको साइटमा पहुँच गर्छन्। त्यसो गर्न, तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईंले अपाचे सबैभन्दा भर्खरको संस्करण प्रयोग गरिरहनु भएको छ। यसले एक पृष्ठको URL लाई आगन्तुकहरूलाई फरक देखाउँदछ। यो अन्तिम उदाहरण हो - सायद - धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि केवल .htaccess फाईलमा प्रयोग भइरहेको लागि अलिक जटिल। जे होस्, मैले फाइलमा के प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने दायरा देखाउन यो समावेश गरेको छु। तपाइँको .htaccess फाइलमा यो थप गर्नुहोस्:
.Htaccess को साथ अगाडि बढ्दै
.Htaccess फाईलसँग काम गर्नु तपाईंको वर्डप्रेस साइटले कसरी अधिक मौलिक स्तरमा काम गर्दछ भन्ने बारे जान्नको लागि एक उत्तम तरिका हो, र तपाईंलाई अनुकूलनको लागि विशाल स्कोपको एक झलक दिनको लागि जुन एक मानक WP साइटले तपाईंलाई पनि दिन्छ। हामीले माथि वर्णन गरेका आधारभूत परिवर्तनहरू गरेर .htaccess फाईलसँग काम गर्नमा तपाईं एक पटक मास्टर गर्नुभयो, विकल्पहरूको सम्पत्ति तपाईंको लागि खुल्छ। एक, हामीले अघिल्लो पटक कभर गर्यौं, क्षमता छ तपाईंको WordPress ब्लग रिसेट गर्नुहोस्.
अर्को कुरा यो हो कि तपाइँको WordPress सुरक्षा सुधार गर्ने धेरै तरिकाहरू या त .htaccess फाइललाई सिधा परिवर्तन गर्दछ, वा उही FTP प्रणाली प्रयोग गरेर अन्य मूल फाइलहरूमा परिवर्तन गर्दछ। अर्को शब्दहरु मा, तपाइँ एकपटक तपाइँको साइट को नट र बोल्ट मा हेर्न शुरू गर्नुभयो, तपाइँ अनुकूलन र सुधार को लागी अन्त संभावनाहरु पाउनुहुनेछ।
टैग: 301 पुन: निर्देशितअनुमतिसबैबाट इन्कार गर्नुहोस्filezillaftp.htaccesshtaccess फाइलhtaccess filematchhtaccess url परिमार्जन गर्नुहोस्htaccess पुनर्लेखनhtaccess सुरक्षाआदेश अस्वीकाररेगेक्सWordPressWordPress बैकअप
ग्यारी स्टीभन्स एक फ्रन्ट-एंड विकासकर्ता हो। उहाँ एक पूर्ण-समय blockchain geek र एक स्वयंसेवक Ethereum फाउन्डेशनका लागि काम गरिरहनु भएको छ र साथै एक सक्रिय Github योगदानकर्ता।
कटौती: नक्कल ग्राहक डाटालाई बेवास्ता गर्न वा सुधार गर्नको लागि उत्तम अभ्यासहरू
The उदाहरण व्यवसायहरू महामारीको समयमा बढ्न कसरी सक्षम थिए